Dr. Abiy Speech, Ambo April 11, 2018 Afaan Oromoo – Oromo Intellectuals Platform
Dr. Abiy Speech, Ambo April 11, 2018 Afaan Oromoo
April 11, 2018 April 16, 2018 oromointellectualsplatformUncategorized
Dr. Abiy Speech Ambo April 11, 2018
Kabajamtoota Aanga’oota Mootummaa Ol’aanoo
Abbootii Heeraa, Amnataa, jaarsolli biyaa,
Qeerroo Gaachana biyyaa
Kabajamtoota Ummata Magaalaa Amboo fi Naannawaa ishee
Kabajamtoota Keessummoota waamichi isiniif taasifame hundaaf
Hundaa ol fedhii yeroo dheeraa ummanni keenya seenaa biyya kanaa gara boqonnaa hammattummaa fi miira jaalalaa cimaatti ceesisuuf agarsiisaa ture hojiitti jijjiiruudhaan gahumsa itti gaafatamummaa fudhachuu fi milkeessuu itti dandeenyu arganneerra. Qabsoon keenya qabsoo moo’ataa akka ta’uuf tarsiimoo keenyeen injifachuun danda’ameera. Iccitiin injifannoo keenyaa seenaa darbe lakkaa’uu qofaa odoo hin taane of-duratti fageessinee ilaaluudhaan jijjiiramaaf tokkummaadhaan hojjechuu keenyaani.
Naannoon keenya Oromiyaa fi biyyi keenya Itoophiyaan imala jijjiiramaa irratti argamu. Imalichi naamusa cimaa fi sirnaan hogganamuu barbaada. Tibbana Taateen addaa wal-harkaa fuudhiinsa baallii karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een raawwatame bu’aa fi agarsiistuu imala kanaa ti. Sababiinsaa, sagaleen ummataa dhaggeffatamuu kan mirkaneessedha. Ummanni keenya qabsoo taasisaa ture keessatti bilchina siyaasaa mul’ise daran cimsuudhaan milkii haaraa galmeessuuf isa kaleessaa caalaa warraaqummaa addaatiin socho’uutu nurraa eeggama.
Beekumsii fi ga’umsi hiyyummaa, boodatti hafummaa fi al-seerummaa ittiin injifachuu dandeenyu wal dhaga’uu fi dhaggeeffachuu keessaa madda. Yaadni moo’ataa fi bu’aa qabeessis akkuma kana. Ilaa fi ilaameen yoo jiraate, sirni wal dhaggeeffachuu yoo gabbate, umriin gadadoo ni gabaabbata. Kanaaf, aadaan wal dhaggeeffachuu daran gabbachuu qaba. Sana ta’uu baannaan, hanga fedhe ifaajnus bu’aa quubsaa buusuu gonkumaa hin dandeenyu.
Gaaffiiwwan dargaggootaa fi dubartoota keenyaa hanga yoonaatti hin deebi’in jiran hedduun jiraachuu isaa ni hubanna. Sochii hanga yoonaatiin rakkoo hojii dhabdummaa furuudhaaf hangi deemame salphaa ta’uu baatus, guddina fedhii misoomaa jiru waliin yoo madaalamu baay’ee kan hafu akka ta’e qorannee adda baasneerra. Argannoo keenyarraa kaanee tarkaanfiiwwan furmaataa gara garaa fudhachuu eegaleerra.
Hojii qorattoonnii fi qooda fudhattoonni barnootaa sadarkaa adda addaatti hojjetaniin dhimmi barnoota qulqullina qabuu fi lammii ga’umsaa fi dandeettii qabu uumuu xiyyeeffannoo addaa kan barbaaduu dha. Hojiin kun akka eegametti ta’ee, dhaloonni egeree manneen barnootaa keessatti argamus baratee of gahoomsuudhaan ijaarsa biyyaa fi naannoo keenyaa keessatti qooda isaa gumaachuun gootummaa ta’eesaa hubatamuu qaba.
Haaluma wal fakkaatuun, hayyoonni ummanni hiyyeessi kun isin barsiisee fi rakkinni isaa rakkina keessan ta’uu amantaan fudhattanii, qorannoowwan jiran jiruu fi jireenya isaa fooyyessuu danda’an gaggeessudhaan beekkumsa qabdan hunda akka gumaachitaniif waamicha dirqama lammummaan isiniif dhiyeessuun barbaada.
Dhumarrattis, yeroon itti aanu yeroo tokkummaan ummata Oromoo caalmaatti cimee, fakkeenya gaarii walta’iinsa biyyaalessaa saboota, sab-lammootaa fi ummattoota biyya keenyaa itti ta’u arguuf abdachuu bira darbee, beekumsa akka maallaqa sabbata aayyootti guduunfannee, waan dubbannuu fi hojjennu wal simsiifnee imala keenya gara fuula duraa kan itti milkeessinu nuuf haa ta’u jechaa seenaa kaleessaa jijjiirrtanii kana booddee Ambo giddu galeessa misoomaaf fi badhaadhinaa, giddu gala adaa fii siyaasa akka taasistan imaanan qabu carraa kanaan ibsuun barbaada.
Oromo Advocacy Alliance has issued a statement regarding Passing of House Resolution (HR) 128